BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal - Maxay tahay dhibaatada weriyayaasha?
Maxay tahay dhibaatada weriyayaasha?
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 24 Agoosto, 2012, 20:51 GMT 23:51 SGA
Weriyayaal ka socda Afrika iyo caalamka ayaa la kulmay Madaxweynaha waddanka Ghana John Mahama oo ay kala hadleen sidii loo sameyn lahaa xeer ilaaliya suxufiyiinta qaaradda Afrika.
Haddaba waxyaabihii ay kala hadleen Madaxweynaha Ghana, ayaa Cumar Faaruuq oo isla markaana ah Guddoomiyaha Ururka Suxufiyiinya Qaranka Soomaaliyeed uu uga warramay Farxaan Maxamed Jimcaale.
Tayland oo looga dhawaaqay doorashooyin
Hay'adaha "Shabaab ayay lacag siiyaan"